‘हामीले व्यवस्था नै अर्कै गरिसक्यौँ’ सुरेन्द्र पाण्डे - Action Khabar - Nepali Online News Portal
‘हामीले व्यवस्था नै अर्कै गरिसक्यौँ’ सुरेन्द्र पाण्डे
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीको आसन्न महाधिवेशन व्यवस्थापनको चटारो छ । मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुन गइरहेको एमालेको दसौं महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिको सह–संयोजक रहेका पाण्डेसँग महाधिवेशनको तयारी, पार्टीभित्रको चुनावी प्रतिस्पर्धा र एमालले लिने भावी कार्यदिशाबारे गरिएकाे कुराकानीः
एमालेको दसौं महाधिवेशनकाे तयारी कस्तो छ ?
आंशिक रुपमा काठमाडौंमा कार्यालय हुने गरी हामी पूरै रुपमा चितवन सर्दैछौँ । यता र उता दुवै स्थानबाट काम हुन्छ । साथै, जनपरिचालनको काम पनि भइरहेको छ । हामीले पाँच लाख मानिसलाई नारायणी नदी किनारमा उपस्थित गराउने लक्ष्य लिएका छौँ । यसको तयारी पनि भइरहेको छ । चितवनभरि नै स्वागतद्वार बनाइने छ र चितवनका छिमेकी जिल्लाहरू नवलपुर, धादिङ, मकवानपुुरमा पनि द्वार बनाइने छ । द्वार निर्माणका लागि स्थानको छनोट गरी विभिन्न संघसंस्थालाई जिम्मेवारी दिने काम सुरु भएको छ ।
मंसिर ११ गते बिहान ८ बजेदेखि कार्यक्रम सुरु हुुन्छ । एकदेखि डेढ घन्टा जति बन्दसत्रको आरम्भ कार्यक्रम रहेको छ । यसमा अध्यक्षको सम्बोधन र विभिन्न समिति तथा त्यसको अध्यक्ष मण्डल तोक्ने काम हुन्छ । अध्यक्ष मण्डल गठन भएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ र नोमिनेसनको काम हुन्छ । सायद दुई बजेसम्म नोमिनेसनको काम सम्पन्न हुनेछ । त्यसपछि बेलुकी छ बजेसम्म नोमिनेसन फिर्ता लिने समय तोकिने छ ।
विधान महाधिवेशनमा हामीले विचार र सैद्धान्तिक पक्षको टुंगो लगाइसकेका छौं, यसपालिको महाधिवेशनमा चाहिँ नेतृत्व मात्र टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
यसपटक मेसिनबाट भोट गरिने भएकाले दिनभर भोटिङको विषयमा प्रतिनिधिहरूलाई तालिम पनि दिनेछौँ । साथसाथै विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि निरन्तर चलिरहने छन् । मंसिर १२ गते बिहान ८ बजेदेखि भोटिङको काम सुरु हुन्छ, यसमा आठदेखि दस घन्टा लाग्ने अनुमान गरेका छौँ ।
२०७७ फागुन २८ पछि पुनःस्थापित एमालेभित्रको परिवेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) रहँदा ताकाको माओवादी केन्द्रको एउटा समूह एमालेभित्रै छ, त्यसो त पार्टीभित्रकै विचार समूह पहिलेदेखि नै क्रियाशील छ। यसपटक महाधिवेशनमा वैचारिक मन्थन निक्कै चर्किएला जस्तो देखिन्छ नि ?
एमालेले नवौं महाधिवेशनमा नै विधान महाधिवेशनमा विचार र विधिको टुंगो लगाउने तथा मूल महाधिवेशनमा चाहिँ नेतृत्व टुंगो लगाउने भनेर व्यवस्था गरिसकेको छ। यसमा कुनै फरक हुने छैन । हामीले व्यवस्था नै अर्कै गरिसक्यौँ । यसअघि भएको विधान महाधिवेशनमा हामीले विचार र सैद्धान्तिक पक्षको टुंगो लगाइसकेका छौं, यसपालिको महाधिवेशनमा चाहिँ नेतृत्व मात्र टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
अर्को कुरा, एमालेको विरुद्धमा पाँचदलीय गठबन्धन रहेको छ र, सम्मुखमा चुनाव आइरहेको छ । त्यसैले यी दुवै परिस्थितिसँग मुकाबिला गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ । यो दुई चुनौतीलाई परास्त गर्न पहिलो त हामी एकताबद्ध हुनुपर्ने छ । दोस्रो, हामीविरुद्ध भएको गठबन्धनलाई परास्त गर्नुछ । यस्तो अवस्थाबीच हुन गइरहेको यो महाधिवेशन निकै महत्वपूर्ण र निर्णायक रहेको छ । साथै यी कुरालाई मध्यनजर गरेर नै यसपटकको महाधिवेशनले दिशानिर्देश गर्नेछ ।
- ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार १०:०२ मा प्रकाशित